Waxay ka kooban yihiin guryaha shaandhada, walxaha shaandhaynta ee ay taageerayaan baqashada daloolsan, iyo qabanqaabada xidhidhiyaha togan si looga fogaado marin kasta iyo isku xidh dhamaadka ikhtiyaarka ah.
Shayga shaandhaynta: Shayga shaandhada dambiisha waxa ka mid ah xaashi daloolin oo birta ah, shabag-xidhka birta ah iyo marada xariirta ee birta ah Marka la eego cabbirka guud iyo darajada shaandhaynta, waxaanu sidoo kale ku siin karnaa badeecado waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Codsiga: filtarka dambiisha waxaa inta badan loo adeegsadaa batroolka, warshadaha kiimikada, cuntada, cabitaanka, daaweynta biyaha iyo warshadaha kale.
Hawlgalka: dareere aan sifeynin ayaa galaya oo dhex mara qolofta dambiisha. Marka loo eego naqshadeynta, maaddooyinka adag waxay ku jiraan gudaha / dibadda dambiisha waxaana laga saaraa inta lagu jiro dayactirka qalabka. Waxay haystaan ​​qalab dib-dhaqista oo goobta dhexdeeda ah oo badanaa uma baahna inay ka saaraan dambiisha nadiifinta.
Shaandhooyinka kolayga waxaa badanaa lagu qalabeeyaa qalab guga oo ku yaal dusha sare ee walxaha shaandhada. Tani waxay xaqiijin doontaa meesha nooc kasta oo ka mid ah marin-dhaafka iyo dambiisha xaqiijinta, xataa haddii ay dhacdo ka soo horjeeda. Shaabad O-ring oo ikhtiyaari ah oo u dhaxaysa cidhifka iyo dhexroorka guriga ayaa ka hortagaysa dareeraha hareerihiisa ku wareegsan.
Aag weyn, dambiil culus.
Hoos u dhaca cadaadiska
Guryuhu waa tubooyinka joogtada ah.
Daboolka waxa lagu xidhay O-rings.
Birta kaarboon ama birta aan daahin (304 ama 316) guri.
Fudud in la nadiifiyo.
Doorashada dib-u-dhaqidda deegaanka.
Heerka sifaynta wuxuu u dhexeeyaa 5 microns ilaa 2000 microns iyo wixii ka sareeya.
Shaandhaynta dambiisha laba jibaaran
Naqshad lagu qiimeeyay danab sare ayaa diyaar ah.
Socodku wuxuu gaaraa 2000 m3 / h.
Adeegyada naqshadaynta gaarka ah.
Dhammaan xayndaabyadu waxay ka samaysan yihiin bir aan fiicnayn 316L, birta 316 iyo muraayadda SS304 oo la safeeyey si ay uga hortagaan ku dhejinta wasakhda iyo miisaanka.
Qolfoofka birta kaarboon waa ciid la qarxiyay oo lagu dahaadhay resin epoxy, oo ugu dambayntii lagu dahaadhay laba lakab oo dhaldhalaalka synthetic ah.
Way fududahay in la ilaaliyo dareeraha dareeraha ah.
Dhululubada laba-jibbaaran/saddex-jibbaaran iyo unug jaakad leh ayaa diyaar ah.
Heerkulka sare iyo naqshadaynta cadaadiska sare ayaa la heli karaa.
Badanaa waxaa loo qaabeeyey sida aagga qulqulka bilaashka ah ee shaashadda, taas oo ah 4 - 6 jeer xajmiga qulqulka dhuumaha.
Doorashada xubin shaandhaynta dambiisha
Naqshad dhululubo kali ah.
Naqshad dhululubo laba jibaaran.
Naqshad dhululubo badan.
Naqshadaynta curiyaha laalaabi karo waxay ku habboon tahay hoos u dhaca cadaadiska hooseeya iyo xajinta wasakhda sare.
Hore: 304/316 Saxanka Shaandheeyaha Birta La Siintered, Saxeexa Filterka Filterka ah 0.5 -100 Micron
Xiga: shaandhada saliidda gaarka ah ee aan lahayn birta ka samaysan shaandhada shaandhada